Wararka - Codsiyada Weyn ee siddo Slip Capsule Slip
Waa maxay giraanta siibashada? Giraanta silbashadu waa aalad korontada ku shaqaysa oo u oggolaanaysa 360 darajo wareeg aan xad lahayn inta lagu wareejinayo awoodda, signalada, xogta ama warbaahinta laga soo bilaabo madal taagan oo loo rogo madal wareegsan, waa isugeyn Rotary muhiim ah ama is -dhexgalka korantada ee nidaamyada xakamaynta dhaqdhaqaaqa badan. Wareegyada kaabsulka is haysta ee caadig ah waxay leeyihiin flange si loogu dhejiyo, sidaa darteed waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa siddooyinkii silsiladda flange -yaasha ee yaryar. Noocyada kaabsulka is-hoosaysiintu waxay u yeeraan sida baahida ugu weyn ee siddooyinkii siibashada ee suuqyada, xirmadooda yar ee jir ahaaneed, signalada awoodda leh iyo awoodda wareejinta xogta iyo qiimaha aadka wax-ku-oolka ah ayaa si weyn u hagaajin kara aaladda macaamiisha dhammaadka ah iyo qiimaha wax-soo-saarka.
Nidaamyada kaamirooyinka amniga ayaa ah siddooyinkii kaabsulka 'caadiga ah iyo waliba mugga ugu weyn ee dalabka dalabka. AOOD 6 fiilooyin, 12 fiilooyin ama 24 xadhig oo ah buraashka kaabsulka kaabsalka buraashka dahabka ah ee caadiga ah ayaa si weyn loogu adeegsadaa kamaradaha CCTV ee qumman, HD-SDI kamaradaha amniga, kamaradaha IP, kamaradaha PTZ iyo kamaradaha digsiga & janjeera, noloshooda ilaa 10 milyan oo kacdoon iyo wuxuu si habsami leh ugu wareejin karaa USB, Gigabit Ethernet, BUS, dareemayaasha iyo calaamadaha xakamaynta. Faraantiyadaan yar -yar ayaa sidoo kale lagu dari karaa isku -darka isku -dhafan ee isku -dhafan ama FORJ si ay u siiyaan dhammaystiran HD fiidiyaha ama is -dhexgalka xogta ballaaran, si ay ugu haboonaato codsiyada shuruudaha sare sida kaamirooyinka kormeerka dhuumaha wareegga 360 darajo, ROV -yada yaryar, robots -ka guriga lagu nadiifiyo iyo qalab yar oo sax ah . Xidhmada yaryar iyo ilaa 60 wareeg, signaal aad u fiican iyo kartida wareejinta xogta ayaa ka dhigaysa xalka ugu fiican ee giraanta silsiladda nidaamyada xakamaynta dhaqdhaqaaqa meel bannaan oo xadidan.
Waqtiga dhejinta: Mar-09-2021